Sida ay u shaqeyso - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Tallaabooyinkan degdegga ah iyo kuwa fudud, Sunsonexpress waxay kaa caawin kartaa baabi'inta madax-xanuunnadaada oo waxay kaa caawin kartaa inaad kor u qaaddo meheraddaada. Si dhakhso leh oo sax ah u la socodsiinta macluumaadka bakhaarka gudaha iyo macluumaadka dabagalka
TALLAABO 1- XAL LAGU SALAMAY
Diyaar ma u tahay inaad bixisid fulintaada? La xiriir Sunsonexpress iyo maareeyaha horumarinta ganacsiga ayaa loo qoondeyn doonaa taageerada inta lagu jiro hawsha oo dhan. Ganacsade kasta, waxaan dib u eegi doonnaa badeecooyinkaaga, baahiyaha kaydinta, suuqa bartilmaameedka, waxaanna ka jawaabi doonnaa su'aalaha aad qabto. Intaa ka dib waxaan falanqeyn doonnaa baahidooda ganacsi waxaanan bixin doonnaa dhammaystirka ugu fiican iyo xalka maraakiibta.
TALLAABO 2- U SOO DIR MAAL-GALIN Sunsonexpress
Ka dib markaad abuurto koontadaada isticmaale ee bilaashka ah, fadlan samee ASN (Ogeysiiska Dhoofinta ee Horukacsan) una rar badeecadaada badeecada xarunta Sunsonexpress. Ma jiraan shuruudaha ugu yar ee mugga ah, u rar alaab inta aad rabto. Ganacsiyadu waxay ka faa'iideysan karaan qiime-dhimista dhoofinta dhimista ee Sunsonexpress.
Kooxdayadu waxay helayaan keydkaaga, waxay sameeyaan baaritaanno faahfaahsan, sawirro ka qaadaan ama ku qabtaan QC faahfaahintaada, ka dibna waxay ka helaan guri ay ka helaan xarunta fulinta ee aad dooratay, waad kormeeri kartaa oo aad xakamayn kartaa alaabadaada adoo adeegsanaya xarunta xisaabta。
Tilaabada 3 - AMARKA ABUUR
Macaamiisha ayaa amarada ku bixiya websaydhkaaga e-commerce, adiguna waxaad u gudbisaa kooxda Sunsonexpress adoo u maraya API, duubista dufanka adoo adeegsanaya CSV ama gacanta ku abuuraya amarro.
Amaradaada ayaa la helayaa oo si toos ah loogu baarayaa nidaamkeena iyadoo la adeegsanayo nidaamkayaga maaraynta bakhaarka gudaha.
Tallaabada 4 - DIIWAANKA, XIRIIRKA IYO DIIWAANKA GAADIIDKA
Mar alla markii aad ku soo gudbiso amarrada xarunta koontada ka hor waqtigeenna go'ay, Sunsonexpress waxaa ka go'an fulinta isla maalintaas. Waxaan soo qaadaneynaa oo xirxiraynaa si taxaddar leh waxaanna diyaarin doonnaa maraakiibta caalamiga ah si deg deg ah. Dhanka kale waxaa laguu oggol yahay inaad yeelato aragti dhammaystiran oo aad ku xakameyso nidaamka fulinta iyadoo loo marayo xarunta koontada.
Kooxdayada fulinta khabiirkeennu waxay si taxaddar leh u xushaan oo u amraan amarradaada kuna dar wixii gelin ah ama alaab xayeysiis ah oo aad rabto.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa inaad aragto dhamaan howlaha oo dhan oo aan kula soconno bakhaarka ilaa macaamiishaada albaabka.
Tilaabada 5-WADA-QAADASHADA HELA PARCEL
Kadib maalmo cayiman oo gaadiid ah, macaamilku wuxuu helayaa xirmooyin. Kaliya ma buuxineyno oo waxaan gaarsiineynaa baqshaddaada, laakiin sidoo kale waxaan ku bixinnaa qanacsanaanta macaamilka.
Miyaad ka fikireysaa inaad ku wareejiso fulinta eCommerce-kaaga Shiinaha? Hada fadlan nala soo xiriir.